UMTSHATO WESIBINI KALAUREN CONRAD KUNYE NOMYENI UWILLIAM XELELA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato U-Lauren Conrad ubhiyozela uMtshato weSibini noMyeni uWilliam Xelela: Kwiminyaka emininzi emininzi
U-Lauren Conrad ubhiyozela uMtshato weSibini noMyeni uWilliam Xelela: Kwiminyaka emininzi emininzi
Ubuntu beTV, umyili wefashoni, kunye nombhali uLauren Conrad kunye nomculi uWilliam Tell bazimase itheko 'lokusungula incwadi' kaLauren Conrad 'kwindawo yokubonisa yaseKohl ngoMatshi 23, 2016 kwisiXeko saseNew York. (Ifoto nguLarry Busacca / imifanekiso ka-Getty ye-PMK * BNC)
Ngu: Esther Lee 09/13/2016 ngo-4: 25 PM
Esinye isizathu sokubhiyozela! U-Lauren Conrad uthumele iifoto zakhe ezithandekayo kunye nomyeni wakhe, uWilliam Tell, behlonipha umtshato wabo wesibini ngoLwesibini, nge-13 kaSeptemba.
Umyili wephepha lesithsaba, oneminyaka engama-30, wasebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ukusihlangula esi sihlandlo, waze wathumela nefoto efanelekileyo emtshatweni wabo nge-Instagram. Ukubhiyozela iminyaka emi-2 emangalisayo nothando lwam namhlanje! UConrad ubhale, ecaleni kwe-snap yakhe emanga umyeni wakhe esibingelelweni.
iilokhwe zangaphandle zomtshato zasehlotyeni
Ukubhiyozela iminyaka emi-2 emangalisayo nothando lwam namhlanje!
Ifoto eposwe nguLauren Conrad (@laurenconrad) ngo-Sep 13, 2016 ngo-2: 28 pm PDT
Wongeze kuFacebook: Andikholelwa ukuba sekuyiminyaka emibini okoko mna noWilliam sabopha iqhina! Yonwabela iminyaka emininzi ngakumbi.
Inkqubo ye- Iinduli alum emva koko idityanisiwe kwiposi kwiwebhusayithi yakhe , ebandakanya umyalezo ovela kwiqela lakhe. Ukonwaba isikhumbuzo somtshato wesibini, uLauren noWilliam! oogxa bakhe bavakalise. Asinakuyikholelwa indlela elikhawuleze ngayo ixesha lokubhabha-kubonakala ngathi bekuyizolo ukuba besibhiyozela nje umtshato wakho! Uvuyo kubomi bonke obuzaliswe luthando nolonwabo.
UConrad kunye nomntu owayesakuba yirocker, 36, Nditshatile kwiminyaka emibini edlulileyo kumsitho we-rustic eSanta Ynez, eCalifornia. Umtshakazi wayenxibe ilokhwe eyiChantilly e-Badgley Mischka enololiwe weenyawo ezili-10 eyayilungiselelwe nguMark Badgley noJames Mischka. Ingubo ekuqaleni yayiquka imikhono emide, kodwa uConrad uxelele umthungi ngomzuzu wokugqibela ukuba ufuna ukuhamba engenamikhono.
ngowuphi umnwe onxiba umsesane wakho wokuzibandakanya
Ndaziva ngathi andinakukuzikhupha, uxelele ngaphambili Ngeveki , epapashe ukujonga kokuqala icwecwe lakhe lomtshato ngo-2014. Ndandingathi, 'Mnumzana, ukuba anizinqumli, ndiza kusebenzisa isikere sam sasekhitshini ndizisike.' (Umtshakazi kamva watshintshela kwisinxibo esingenamtya sikaMonique Lhuillier ekwamkelweni kwakhe.)
UConrad uqhubeke nokwabelana amanye amaxesha akhe awathandayo ukusuka kubatshati kwiposti yebhlog kunyaka olandelayo. Umtshato wethu ibiliphupha, kwaye mna noWilliam besingaphaya kwenyanga sonwabile ukubhiyozela kunye neyethu abahlobo abasenyongweni kunye nosapho, i-guru yokuphila yabhala ngelo xesha. Sithathe uhambo lwethu Ikhefu lomtshato Kungekudala emva kosuku olukhulu, kwaye konke kwakuziva kunomdla kwaye kuyonwabisa.
Ngexesha nje lesikhumbuzo sakhe ngolwe-Lwesibini, uConrad wafumana umfanekiso-ogqibeleleyo we-manicure.
Ndifumene nje ifancy rose mani from @oliveandjune! Bazakuba kwi @lclaurenconrad pop up namhlanje nangomso!
Umama oneentloni ngomyeni onxibe ilokhwe
Ifoto eposwe nguLauren Conrad (@laurenconrad) ngo-Sep 13, 2016 ngo-11: 59 am PDT
Ndonwabile malunga ne-manicure yam yesiFrentshi eguqukileyo evela @oliveandjune! Kwaye eyona nto inomdla ngakumbi kukuba baya kuba @lclaurenconrad bazokuvela nam kule veki ukuze abafana bame ngezinye !!!
Ifoto eposwe nguLauren Conrad (@laurenconrad) ngo-Sep 5, 2016 ngo-4: 49 pm PDT
Esi sibini sigqibe ukubonakala esidlangalaleni ngo-Matshi e-NYC, apho umsunguli we-Little Market wabamba ukusungulwa kwencwadi yakhe ULauren Conrad Bhiyozela.
Ukucinga nge-2 yesiKhumbuzo seZipho eziya kuyenza ukuba ikhunjulwe
USarah Michelle Gellar Wenza Uthando Lomlingani Wakho Mngeni, Ebonisa Ukuba Yena noFreddie Prinze Jr.
UMichael Douglas kunye noCatherine Zeta Jones babhiyozela i-15th Anniversary
Ubungakanani besitovu esiqhelekileyo (Isikhokelo soBungakanani)
I-Bachelorette JoJo Fletcher yayinguMtshakazi kunye nengubo yakhe yayiPhantsi kweedola ezili-100: Fumana iinkcukacha
I-Tory Burch ibandakanyeke kuPierre-Yves Roussel
ICOLTON NGAPHANTSI KWE-KODE, KATIE
I-WAGS 'uNicole Williams kunye nomdlali we-NFL uLarry isiNgesi ngentsasa yoMtshato wabo banokubalisa kakhulu
Intombazana eneminyaka engama-95 ubudala Intombazana enguMakhulu ibiba ukuqaqanjelwa kuMtshato woMzukulwana
'I-Bachelor eParadesi' I-Recap: UJosh Murray kunye noNick Viall Balwa noMfazi ofanayo-Kwakhona
AmaJapan afunxa iitubhu (Iingcamango zoyilo)
Iingcamango zeGumbi lokuDlela lama-43 (iiYilo eziSystem)
njani toe iqhina lokugoba
ibhokisi yomtshato yomtshato
indlela ye-rsvp kwisimemo somtshato nge-imeyile amagama
ukuqhelisela ilokhwe yokutya komama kamyeni
yenza ukugcina umhla
Imifanekiso yeziqithi zasekhitshini
Allison Williams Dishes on his 'Very Private' Wedding and Requirements mahitaji
Inkulumbuso yase-Canada u-Justin Trudeau Photobombs Umtshato waselwandle- kwaye akanasinxibo